Lazarosy: IDE an'ny Pascal mitovy amin'ny Delphi | Avy amin'ny Linux
Lazarosy Klone maimaim-poana izy io Delphi, ny IDE ankafizin'ireo izay manao programa amin'ny Object Pascal amin'ny Windows. Mamela ny fivezivezena ny tetikasa Delphi ary misy kinova ho an'ny Windows, Mac ary Linux.
Raha programmer Windows Pascal ianao dia mety fantatrao Delphi, ilay IDE novolavolain'i Borland. Misy fomba iray hamindrana ny tetikasanao amin'ny Delphi mankany Linux? Tamin'izany fotoana izany dia nanandrana nanatanteraka an'io nofinofy io i Borland, namoaka an'i Kylix tamin'ny 2006. Tonga hatrany amin'ny andiany 3 ary nahitana ny fanohanana an'i Object Pascal sy C ++, saingy tsy niroborobo velively.
Soa ihany, misy fampiharana fahatelo izay afaka manampy antsika raha tsy mahazo aina firy ny toekarentsika: Lazarosy. Tetikasa novolavolaina avy Pascal maimaim-poana, "open source" ary azo alaina ao amin'ny Windows sy Linux.
Lazarus dia, ho an'ireo izay tsy mahalala, tontolo iainana fampandrosoana haingana (RAD). Izy io dia klone iray amin'ny tontolo Delphi ho an'ny GNU / Linux. Izy io dia miompana amin'ny zavatra ary mamela ny fampandrosoana programa ao amin'ny Free Pascal (compiler Pascal azo entina, maimaimpoana ary malalaka, izay misolo tena ny vokatra varotra Turbo Pascal sy Delphi). Raha fintinina, Lazarus dia tontolo iainana miharo (IDE), izay mampivondrona ny asa fanovana, fanafoanana ary fanatanterahana amin'ny fitaovana iray.
En Ubuntu ary ny derivatives:
sudo apt-mahazo mametraka lazarus
pacman -S lazarus
mametraka lazarus ianao
Azo alaina ao amin'ny trano fivarotana ofisialy ny ankamaroan'ny fizarana malaza koa izy io.
Azo antoka fa misy foana ny safidy download kaody loharano ary manangona azy.
Farany nefa tsy farany, marihina fa manana ny tetikasa Wiki tena feno amin'ny teny espaniola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Lazarosy: IDE an'ny Pascal mitovy amin'ny Delphi
Windows Command dia hoy izy:
Windows MANDAAA !!! Aguanteee Lazarus ho an'ny WINDOWS !!! 😀
Valio ny Windows Command
Reneco dia hoy izy:
Ny hafainganan'ny fampiharana ireo fandaharana novolavolaina tao Lazarosy dia tsy voatonona firy, rehefa mampiasa freepascal dia haingana dia haingana, amin'ny kahie dia haingana kokoa noho ny gcc sy Visual Studio.
Mamaly an'i reneco
edwin lamoca dia hoy izy:
Tiako foana ny manao programa amin'ny Pascal ary avy eo mifindra any Delphi, tena tsara. Fa izao rehefa mampiasa rindrambaiko maimaim-poana aho dia i Lazarus no manohy manamboatra ny kaodiko.
Valiny tamin'i Edwin Llamoca
SpaceFM: PCManFM amin'ny steroid